10 Tips to BecomeaSuccessful Business Owner ﻿
အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာရန်အတွက် လိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်သော အချက် (၁၀) ချက်
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များအတွင်း စာရေးသူမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမေးအများဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကကျမယ့်အချက်များဟာ ဘာတွေလဲ? ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ထူထောင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဟာ စာရေးသူအတွက်တော့ ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကာလများအတွင်း သင်ယူလေ့လာနိုင်ခဲ့တဲ့ အချက်အချို့ကို www.jobsinyangon.com ကနေတဆင့် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် -
၁။ မိမိတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်များကိုသာ လုပ်ကိုင်ပါ။
သင်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နေရမယ့်အရာများအပေါ် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိနေဖို့နဲ့ ထိုအရာများပြုလုပ်နေရသည်ကို ပျော်ရွှင်မှုရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ “ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အရာများကို လုပ်ကိုင်နေရပါက ထိုအလုပ်များတွင် အမြဲတမ်းအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်”။
၂။ “Yes” လို့ အမြဲတမ်းပြောနေတတ်သူတွေထက် မိမိကိုစိန်ခေါ်မှုများပေးစွမ်းနိုင်မယ့်သူများနဲ့ အပေါင်းအသင်းပြုလုပ်ပါ။
သင့်အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမပြုလုပ်မှီတွင် ဘက်စုံထောင့်စုံမှ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို နားထောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ရိုးသားစွာဖွင့်ဟပြောပြတတ်တဲ့သူများနဲ့ အသိအကျွမ်းဖွဲ့ထားပါ။ မိမိကြားချင်တဲ့အရာများကိုသာ ပြောကြားတတ်တဲ့သူများကိုရှောင်ရှားပါ။ သင့်အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များမချမှတ်မှီတွင် ခက်ခဲမှုရှိလာနိုင်တဲ့နေရာများကို သိရှိထားဖို့က အရေးကြီးလှပါတယ်။
၃။ မိမိရဲ့ဝန်ထမ်းများကို အသိအမှတ်ပြုပါ။
မိမိတို့ဦးဆောင်ရတဲ့ team ဟာ မိမိအတွက် အောင်မြင်မှုများနဲ့ ကျရှုံးမှုများကို ယူဆောင်လာနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ များစွာသောလုပ်ငန်းရှင်များက “ငါ့ရဲ့ဝန်ထမ်းများကို အလွန်အကျူး အလိုလိုက်မိနေသလားလို့ တွေးမိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ကယ်တန်းမှာ ဝန်ထမ်းများမရှိပဲနဲ့ လက်ရှိရောက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဘဝကို ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ ရောက်လာနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ထူထောင်ထားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမောင်းနှင်ဖို့သာလိုအပ်ပြီး တစ်ကယ်တန်းလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတော့ ဝန်ထမ်းများမှ ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတာဖြစ်တာကို သတိချပ်ရပါမယ်။
၄။ မိမိတို့ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူအသုံးပြုတဲ့ customer များဘက်မှအမြင်ဖြင့် အမြဲစဉ်းစားပါ။
ဒီအချက်ဟာ Promotion များပြုလုပ်ရာတွင်ရော ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရာတွင်ရော တန်ဖိုးရှိလာမယ့် အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ “Customer များဟာအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတယ်” ဟူ၍ယူဆထားဖို့ထက် သူတို့ရဲ့ဘက်မှ ပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်ပြီး သင်ဟာ customer တစ်ဦးဆိုပါက အခြားသောသူများမှ သင့်ကိုဆက်ဆံစေလိုတဲ့ ဆက်ဆံပုံအတိုင်း customer များကို ပြန်လည်ဆက်ဆံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ သင့်ရဲ့ supplier များအတွက်
မည်သို့သောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းတွင်ဖြစ်စေ သင်နဲ့အတူတကွ လုပ်ငန်းအရ ဆက်စပ်နေသောသူများနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးများတည်ဆောက်ထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်က ထိုသူများအတွက်ဘာတွေကို ပြန်လုပ်ပေးနိုင်သလဲဆိုတာကို အမြဲတမ်းတွေးတောနေပြီး သင်တို့ဟာတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်မှီခိုနေဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို အမြဲတမ်းသတိပြုပါ။ အမြဲတမ်း e-mail နှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်းများကိုသာပြုလုပ်မနေပဲ သူတို့နဲ့စကားစမြည်များပြော၍ အသိအကျွမ်းဖြစ်စေရန် မိတ်ဖွဲ့ထားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သင်အခက်အခဲများနဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့အခါ သူတို့မှ အကူအညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၆။ မိမိရဲ့အပြိုင်အဆိုင်များကိုလည်း လေးစားမှုရှိပါ။
ဒါဟာအနည်းငယ်ဆန်းကြယ်နေပါသလား? ဒါပေမယ့်ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိနေတဲ့အပြိုင်အဆိုင်များဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုတိုးတက်မှုရှိလာစေရန်အတွက် တွန်းအားပေးနေတဲ့သူများပဲဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသော လုပ်ငန်းအပြိုင်အဆိုင်များနဲ့ မဟာမိတ်များဖွဲ့ထားနိုင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်း ထားရှိသင့်တဲ့ ကျင့်ဝတ်များကို သတ်မှတ်ထားရှိနိုင်မှာဖြစ်သလို တူညီတဲ့ပြဿနာများနဲ့ ကြုံတွေ့လာရပါကလည်း အတူတကွပူးပေါင်းဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ စည်းလုံးခြင်းသည်အင်အားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၇။ မိမိတို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှ ထွက်ခွာဖို့ မဟာဗျူဟာများလည်းချမှတ်ထားပါ။
တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ မိမိရဲ့ကုမ္ပဏီကိုရောင်းချခြင်း (သို့) မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လာရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိရဲ့လုပ်ငန်းအတွင်းမှာ ဆက်ခံမှုပြုလုပ်ရန်အစီစဉ်များကိုလည်းရေးဆွဲထားလိုက်ပါ။ အချိန်ကျလာရင်တော့ မိမိရဲ့အမွေအနှစ်များကိုကာကွယ်ပြီး ကိုယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားအားထုတ်လာရတဲ့လုပ်ငန်းကို တည်မြဲမှုရှိစေရန် စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ခိုင်မာတဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါ။
မည်သူမဆို မိမိတို့ကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့်စနစ်တစ်ခုကိုလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိမိတို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာ အဆမတန်ခက်ခဲလာတဲ့အချိန်များတွင် သင်နဲ့ သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကို ပြန်လည်ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်မယ့် စနစ်တစ်ခုကို လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကို စိတ်ခွန်အားပေးနိုင်မယ့်အရာများ၊ ငွေကြေးအရပြန်လည်ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်မယ့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) အခြားသောလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုကို တည်ထောက်ထားပါ။
၉။ ကျရှုံးမှုများရှိလာတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
နံပါတ် ၈ တွင် သင်ထူထောင်ထားခဲ့တဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုပါ။ အမှားအယွင်းများကို လူတိုင်းလုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြားဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်ပဲ မိမိရဲ့အမှားများကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းမှုပြုလုပ်ပါ။ မိမိတို့ပြုလုပ်မိတဲ့အမှားများမှ လျှင်မြန်စွာနာလန်ထနိုင်ခြင်းနဲ့ သင်ခန်းစာယူနိုင်ခြင်းအားဖြင့် ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့် ခရီးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပိုမိုသန်စွမ်း၍ ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ အမြဲတမ်း ပြန်လည်လှူတန်းမှုပြုလုပ်ပါ။
အစပိုင်းမှာတော့ သင့်ထံတွင် ငွေရောအချိန်ရော ရှားပါးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကူညီခြင်းနှင့် လှူတန်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ထံတွင်ပိုလျှံလာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလိုပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးဖို့ဟာ အရေးကြီးလှပါတယ်။ လုပ်ငန်းများဟာ မိမိတို့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ထောက်တိုင်များဖြစ်ကြတဲ့အတွက် တစ်ခုခုပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဝန်ထမ်းများဟာလည်း မိမိတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ဂုဏ်ယူမှုရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းအသစ်များရရှိလာစေနိုင်သလို ရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းဟောင်းများကိုလည်း ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေဖို့အတွက် အကူအညီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်အနေနဲ့ အဆိုပါလူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ အကူအညီကိုတစ်ချိန်ချိန်တွင်ပြန်လည်ရယူဖို့လိုအပ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ဒါဟာ အနာဂါတ်အတွက် မျိုးစေ့ချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။